कसरी म मेरो आइपड संगीत डाउनलोड गर्छन्? कसरी आफ्नो आइपड संगीत डाउनलोड गर्न
तपाईं एप्पल गरेको कर्पोरेट खेलाडी को गर्व मालिक हो भने, यसबारे आफ्नो आइपड संगीत डाउनलोड कसरी तपाईं को सामने खडा हुन सक्छ। अब यो र हामी समाधान गर्न प्रयास गर्नेछ।
मेरो विकल्प के हो?
गरेको तथ्यलाई सुरु गरौं भनेर आइपड र अन्य एमपी3प्लेयर मा संगीत डाउनलोड लागि विधि
कम्पनीहरु एकदम भिन्न छन्। अन्य संगीत खेलाडी मा, तपाईँले प्रयोग संगीत हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ Windows Explorer एक हटाउन सकिने भण्डार उपकरणमा सामान्य फाइलहरू जस्तै। तर, प्रश्न अलि कठिन "कसरी संगीत को आइपड मा रेकर्ड गर्न"। तपाईं तान्नुहोस् सक्दैन र खेलाडी मा संगीत फोल्डरमा सामान्य रूपमा अडियो फाइलहरू ड्रप, यो iTunes निःशुल्क सफ्टवेयर पनि एप्पल विकास को प्रयोग आवश्यक हुनेछ।
सायद, सुरुमा, यो विधि आश्चर्यजनक जटिल देखिन्छ, तर यहाँ खातामा सबै विवरण लिन्छ र कार्यक्रम साथ काम सुविधाजनक र सुखद छ। कृपया याद गर्नुहोस् कि कसरी आफ्नो आइपड संगीत मा फेंक को प्रश्न, समान समाधान, कुनै कुरा प्लेयर मोडेल (स्पर्श, नैनो, वा फेरबदल) तपाईं के प्रयोग छ।
स्थापना कार्यक्रम बारे
हामी त्यहाँ iTunes छ कि पाएका छन्। यसलाई बुझ्न हामीलाई मदत गर्नेछ
कसरी आफ्नो आइपड संगीत डाउनलोड गर्न। यो अनुप्रयोग एप्पल आधिकारिक वेबसाइटमा डाउनलोड लागि उपलब्ध छ। अर्को, सफ्टवेयर स्थापना गर्नुहोस्।
लागि डाउनलोड संगीत सञ्चालन यो सफ्टवेयर समाधान मार्फत गरिन्छ, यहाँ पनि त्यहाँ तपाईं संगीत को दुनिया मा अवस्थित बिल्कुल सबै विधाहरू पाउनुहुनेछ यो एक रेडियो छ। स्थापना पूरा गरिसकेपछि, अनुप्रयोग सुरु, र तपाईं मनोरञ्जन र मनोरञ्जनको अनन्त संसारमा आफूलाई पाउनुहुनेछ।
कसरी आइपड मा संगीत डाउनलोड गर्न: एम संगीत पुस्तकालयमा संगीत फाइलहरू थप्न
आफ्नो पुस्तकालयमा संगीत थप्न, त्यसपछि "पुस्तकालयको फाइल (वा फोल्डर) थप्नुहोस्।", वस्तु "फाइल" जाने त्यसपछि तपाईं फेला पार्न र आवश्यक चयन आवश्यक संगीत। संगीत फाइलहरू थपे प्रक्रिया एक विशेष स्थिति विन्डो प्रदर्शित।
तपाईं आवश्यक सबै, हामी पहिले नै गरेको छ, तर आफ्नो आइपड संगीत कसरी डाउनलोड गर्ने को प्रश्न, हामी तल छलफल गर्नेछौं जो आफ्नो peculiarities, छ। तपाईंको iTunes-लाइब्रेरी संगीत फाइलहरू आवश्यक हुनेछ मा माथि कार्यहरू कारण, तपाईंले सुन्न सक्नुहुन्छ र सजिलो आइपड मा उपकरण ले।
कसरी आइपड मा संगीत डाउनलोड गर्न: एम समिकरण प्रक्रिया
तपाईं सबै समय संगठित गरिएको छ आफ्नो लाइब्रेरी चाहनुहुन्छ भने, यो हुनुपर्छ
त्यसपछि, "सेटिङहरू" जाने त "Add-on" खोल्न र, अन्तमा, चलान "मुख्य", वस्तु मेनु "सम्पादन गर्नुहोस्" बुझाउँछ। गर्दा संगीत पुस्तकालयमा संगीत फाइलहरू थप्न जो प्रदान गर्दछ को iTunes संगीत एक जाँच बाकस, पुष्टि गर्नुहोस्।
कि पछि तपाईं युएसबी-बन्दरगाह प्रयोग गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा प्लेयर जडान र iTunes मा यो स्थापना गर्न आवश्यक छ। "संगीत" खण्ड, त्यसपछि "लागू गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस् ", सिंक संगीत" भनिन्छ विकल्प चयन गर्नुहोस्। यसरी, उत्पादन स्वतः आइपड तपाईं मनपर्ने मा रेकर्ड गरिनेछ। यदि एक विशेष फाइल ढाँचा, तपाईं कार्यक्रम मा राख्नु जो हाल आइपड-यन्त्र द्वारा समर्थित छैन, iTunes एक उपयुक्त यसलाई गर्नाले, स्वचालित रूपमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गर्नेछ।
समिकरण बारे 5-10 मिनेट लाग्छ। तपाईं आफ्नो पुस्तकालयमा सामाग्री तपाईं आइपड मा राख्न चाहेको मा संगीत चयन गर्न सक्नुहुन्छ - सबै एकैचोटि (यदि स्मृति को राशि र खेलाडी को राज्य), वा केही, वा तपाईंको प्लेसूची पनि एक।
प्लेयर मा संगीत को रेकर्डिङ समाप्त भएपछि, पहिले नै मा प्रदर्शन उल्लेख कि आइपड सिंक पूरा स्थिति विन्डो देखा याद गर्नुहोस्।
म मेरो संगीत फाइलहरू कसरी हटाऊँ?
तपाईं फोल्डर "संगीत" खोल्न र त्यसपछि unneeded ट्रयाक मेटाउन अगाडि बढ्न आवश्यक छ आफ्नो पुस्तकालयमा भएको संगीत फाइल देखि प्लेयर सफा गर्न। खुला iTunes आफ्नो उपकरण र "संगीत" चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि समन्वयन बटन क्लिक गर्नुहोस्। एक पटक तपाईं आफ्नो पुस्तकालय निर्माण, तपाईं आइपड पीसी देखि विच्छेद र ध्वनि आनन्द उठाउन सक्छौं।
तपाईं आफ्नो आइपड छन् भने संगीत गृह बाहिर सेवा केन्द्रमा उदाहरणका लागि, डाउनलोड, र त्यसपछि तपाईँले यन्त्र आफ्नै संगीत फाइलहरू मेट्न अर्को पीसी बाट डाउनलोड थियो सबै संगीत, बरु लिखित सामाग्री रोजेका आफ्नो कम्प्युटरमा पहिले नै थप गर्न, चाहन्छु।
काम उपकरण संग पूरा भएपछि, यो ठीक हटाउन पर्छ। यो उद्देश्य लागि, "यन्त्र हटाउँदै" समारोह मा अर्को आइपड क्लिक गर्नुहोस् र सुरक्षित बन्द मा अन्त सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
iTunes सफ्टवेयर प्रयोग भने यो पीसी, अर्को व्यक्तिको कम्प्युटरमा आफ्नो आइपड जडान छैन। आपतकालीन जडान को मामला मा, उदाहरणका लागि, एक हटाउन सकिने ड्राइभ जस्तै खेलाडी संग जानकारी साझेदारी गर्न, iTunes संग स्वचालित सिङ्क बन्द। यो अन्त गर्न, "सम्पादन गर्नुहोस्" मेनुमा जानुहोस् र चयन "प्राथमिकता।"
अर्को, यो "उपकरणहरू" खण्ड भ्रमण स्वचालित समिकरण ब्रांडेड उपकरणहरू को रोकथाम मा अर्को वस्तुमा एउटा चेक मार्क राख्न क्रममा। यी कार्यहरू पूरा गरेपछि "ठीक" क्लिक गर्नुहोस्।
iTunes मा, बाइपास
अर्को, हामी शक्ति मा, iTunes बिना आफ्नो आइपड संगीत कसरी डाउनलोड गर्ने को प्रश्न विचार
आफ्नो विशेष लोकप्रियता तथापि, हामी मात्र आधिकारिक सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं।
PwnTunes - आधिकारिक iTunes समाधान संग मिलाप गर्न चाहनुहुन्छ गर्दैन नगर्ने जो कोहीलाई पनि लागि उपयुक्त छ कि एउटा अनुप्रयोग हो। वर्तमान म-उपकरणहरू फाइल प्रणाली, आँखा prying देखि लुकेको छ जो मा, सामग्रीहरू फाइल नाम पत्र को अस्पष्ट संयोजन प्रदर्शित सट्टा, सङ्केतन छन्। व्यक्तिगत कम्प्युटरमा डाउनलोड संगीत समस्याग्रस्त छ।
उपकरणमा iTunes बिना रेकर्ड जानकारी यसलाई जब सञ्चालकको devaysa कम्प्युटरमा प्रयोगकर्ता USB मार्फत जडान यन्त्र क्यामेरा द्वारा गरियो जो फोटो, संग मात्र फोल्डर देख्नुहुन्छ किनभने, बिल्कुल असम्भव छ। Windows Explorer मा प्रयोगकर्ता धेरै अतिरिक्त फोल्डरहरू पहुँच छ भनेर परिशिष्ट PwnTunes फोल्डर modifies।
मेरो संगीत। यस खण्डमा, तपाईं यस सूची मा म-उपकरणहरूको लागि संगीत फाइलहरू स्वचालित रूपमा परिवर्तित र त्यसपछि आफ्नो पुस्तकालयमा हस्तान्तरण छन् संगीत रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
iTunes संगीत। यस खण्डमा, तपाईं प्लेयर आफ्नो कम्प्युटरमा आफ्नो लाइब्रेरी हस्तान्तरण र सामान्य फाइल नाम बचाउँछ गर्न सक्नुहुन्छ।
विविध। यो फोल्डर कुनै पनि फाइल को लागि एक रिपोजिटरी, र यसैले उपलब्ध फाइलहरू स्थानान्तरण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा, म-यन्त्र फ्लैश ड्राइव बन्नेछ।
अब तपाईं कसरी आफ्नो आइपड मा संगीत डाउनलोड गर्न थाहा छ।
BlueStacks जड: वर्णन, विशेषताहरु, स्थापना, कन्फिगरेसन र अधिकार
एक्सेल मा क्रमबद्ध। एक्सेल मा काम। एक्सेल उदाहरण
को Windows.old कसरी हटाउने: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
स्थानीय आत्म-सरकारको आर्थिक आधार के छ
Radu मनपर्ने स्वादिष्ट र स्वस्थ जेली रस
"केन" बाल डाई: वैश्विक बजार मा एक नेता
लुइस Tosar: Filmography, जीवनी, व्यक्तिगत जीवन र रोचक तथ्य
फिल्म "बिग विवाह": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र,